नेटफ्लिक्सले यसलाई पुष्टि गर्दछ, उनीहरूले आफ्नो सदस्यतामा मोबाइल खेलहरू समावेश गर्दछ आईफोन समाचार
हामी अधिक र अधिक प्रयोग गर्छौं स्ट्रीमिंग सामग्री सेवाहरू। यो हिजो जस्तो देखिन्छ जब हामीलाई सदस्यता संगीत सुन्न अनुमति दिने पहिलो सेवाहरू आइपुगे, पहिलो क्लाउड भण्डारण, स्ट्रिम भिडियो, आदि। यसलाई रोक्न कोही छैन र हामी यी सेवाहरू बढि खपत गर्दैछौं। Netflix, भिडियो को महान, हरेक समय अधिक शक्ति छ, मान्छे प्लेटफर्म मा सामग्री लाई मन पर्छ र अब तिनीहरू परीक्षण गर्न चाहन्छन् यदि हामी मोबाइल खेलहरू मनपराउँदछौं भने ... नेटफ्लिक्सले तपाईंको भिडियो सदस्यतामा समावेश गरिएको मोबाइल खेलहरू सुरूवात गर्दछ।
यो सत्य हो कि हामीलाई थाहा छैन यो कहिले हुन्छ, तर के स्पष्ट छ त्यो यो हो नेटफ्लिक्सले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क खेलहरू प्रस्ताव गर्दछ. मोबाइल खेलहरू कि एक तरीकाले तिनीहरू आफ्नो मूल सामग्री को एक थप हुन, कि हो, केहि केहि हामी अपरिचित चीजहरू खेल संग हेर्ने। यो सबै उहाँको पछि आउँछ माइक भेर्डू (पूर्व इलेक्ट्रोनिक कला कार्यकारी) को हस्ताक्षर स्ट्रिमि video भिडियो जायन्ट द्वारा, यो नेटफ्लिक्सको आउँछ नेटफ्लिक्सको नयाँ खेल प्रभाग विकास गर्न। नेटफ्लिक्सका मुख्य प्रतिस्पर्धीहरुबाट बजार हटाउन स्पष्ट शर्त यो एप्पल मोडेल मा आउँछ।
हामी खेलहरू हाम्रो लागि नयाँ श्रेणीको सामग्रीको रूपमा देख्छौं, मौलिक चलचित्र, एनिमेसन, र टेलिभिजन रियलिटी शोहरूमा हाम्रो विस्तारको समान। खेलहरू कुनै पनि थप शुल्कमा फिल्महरू र श्रृंखलाहरूमा ग्राहकहरूको नियमित नेटफ्लिक्स सदस्यतामा सामेल हुनेछन्। प्रारम्भमा, हामी मुख्य रूपमा मोबाइल उपकरणहरूको लागि खेलहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं। हामी हाम्रो फिल्म र टिभी श्रृ offering्खलाको प्रस्तावका बारे सँधै उत्साहित छौं र हाम्रा सबै अवस्थित सामग्री वर्गहरूमा बढ्दो लगानी र वृद्धिको लामो बाटोको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं, तर यो देखाइएको छ कि हामी लगभग एक दशकदेखि मूल प्रोग्रामि forको लागि जोड दिइरहेका छौं। हाम्रो विचारमा यो छ हाम्रो ग्राहकहरूले खेलहरू कसरी महत्व दिन्छन् भन्ने बारे जान्नको लागि यो उत्तम समय हो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्स खेल मा दांव। तिनीहरू सम्भावित र सचेत छन् ठूलो बजार शेयर जुन त्यो इकोसिस्टममा बढिरहेको छ र त्यसकारण तिनीहरू त्यो अवसर गुमाउन चाहँदैनन्। यी भिडियो गेमहरू कस्तो हुनेछन्? खैर, म इमान्दारीले विश्वास गर्छु तिनीहरू एप्पल आर्केड थीम्डमा देखिने मानिसहरू जस्तै हुनेछन् indie। यो तपाईंको सदस्यतामा थप गरिएको छ त्यसैले यो पक्कै पनि चाखलाग्दो केहि हुनेछ। र तपाइँलाई, नेटफ्लिक्सले मोबाइल खेल सुरू गर्न सुरू गर्ने बारे तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » नेटफ्लिक्सले पुष्टि गर्दछ, उनीहरूले आफ्नो सदस्यतामा मोबाइल खेलहरू समावेश गर्दछ